काठमाडौं महानगर प्रमुखका उम्मेदवारले कहाँबाट गर्दैछन् मतदान ? - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं महानगर प्रमुखका उम्मेदवारले कहाँबाट गर्दैछन् मतदान ?
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदको उम्मेदवारी दिनुभएका सिर्जना सिंहले वडा नम्बर १६ र केशव स्थापितले वडा नम्बर २८ बाट मतदान गर्ने हुनुभएको छ ।
सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट कामपाको प्रमुखको लागि उम्मेदवारी दिनुभएको सिंहले कामपाको वडा नम्बर १६ स्थित युवक माविबाट मतदान गर्ने बताइएकोे छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० को तर्फबाट प्रमुख पदको उम्मेदवारी दिनुभएका स्थापितले वडा नम्बर २८ स्थित पद्यकन्या क्याम्पस केन्द्रबाट मतदान गर्नुहुने जनाइएको छ ।
त्यसैगरी गठबन्धनकै तर्फबाट उपप्रमुखको उम्मेदवारी दिनुभएका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का रामेश्वर श्रेष्ठले वडा नम्बर १२ र एमालेको तर्फबाट उपप्रमुखको उम्मेदवारी दिनुभएको सुनिता डङ्गोलले वडा २१ बाट मतदान गर्ने बताउनुभयो ।